ezinepolypropylene air-moya filter enemingxuma - China Zhejiang Tiantai Yongzhu Fliter
Ipholiyesta anti-ndawonye inaliti waziva (ezihlangene lwabanyulwa ...
air imeko Isihluzi Mesh
1.first e kuluhlu, ngoko engxoweni yeplastiki 2. ibhokisi kunye sailcloth ngamanzi 3. igama lakho kunye nenombolo wemitha liprintwe kwi umnatha 4. uphawu yakho yokuthumela liprintwe kwi ibhokisi
isampuli: 1-3days, impahla ubunzima ixesha: 10-20days okanye ubungakanani ngalinye
Air ongenisa Isihluzi enemingxuma
Ukuchazwa wenayiloni monofilament umnatha:
1) Amanqaku: 100% nenayiloni
2) ukuThunga: aziluki Plain
3) mesh Bala: 4T ~ 140T njengonombombiya / cm (10mesh ~ 355 umnatha / intshi)
5) Umbala: White (Elungiselelweyo)
6) mesh Ukuvulwa: 30-1500um
Izicelo ze nylon monofilament enemingxuma:
Filteration: Luphawu esetyenziswa kwiindawo njengoko ukuhluza kunye noshishino ngokwahlukana (Luphawu asetyenziswe ukuhluza ukutya kunye filter noshishino), amashishini ze-petroleum, lwekhemikhali, yokunyibilikisa isinyithi, isamente, dedusting lokusingqongileyo kunye am. Rates product ingaba ukusuka-27% ukuya 78%. Afana neshishini ukutya wokugaya ukuhluza kunye nomgubo nokugaya, umama kunye nezinye iinkozo nokugaya. Kanye kwemveliso iswekile, ubisi olungumgubo, ubisi zesoya njl
1.for inani elincinane, eziya ngekhuriya
2.for yanikwa, akhontwe-moya okanye elwandle
Inombolo 3.tracking uya imeyile kuwe emva kokuba umyalelo kuye kuthunyelwe
Kutheni ndifanele ukhetha US?
Tiantai Yongzhu Isihluzi Factory iye olulodwa ekwenzeni umoya-moya filter enemingxuma iminyaka engaphezu kwama-15, siyazi indlela yokwenza imveliso umgangatho ophezulu kunye price.hope elungileyo siya kuba intsebenziswano entle kuwe.
2.Can I ukufumana isaphulelo?
Njengoko niyazi ukuba, siphumelela emarikeni ixabiso kukhuphiswano nomgangatho elungileyo. Ngoko ke, ixabiso sikunike sisoloko ngeyona. Kodwa kukunika isaphulelo ukuba ubungakanani oda yakho ibe nomtsalane.
3. njani ukulungisa iingxaki ukuba iimpahla uneengxaki kwaye awukwazi ukuyisebenzisa?
Thembisa ukuba iimpahla ukufumana imbuyekezo kwaye uyabuyiselwa ukuba awanelisekanga kunye nomgangatho.
4. Ukuze ubuninzi yam encinane, ngaba wena xana?
Yes.We uya kukhonza yonke umxumi kunye iimveliso ezisemgangathweni kunye neenkonzo nokuba ingakanani yakho
5.Can ufumana inkonzo OEM?
Ewe. Sinikeza iinkonzo OEM kubathengi.
Previous: ring Steel bag filter inxeba
Okulandelayo: ipholiyesta air-moya filter umnatha
Air Condition Isihluzi umnatha
Ekupholiseni Isihluzi ngelaphu
Ekupholiseni Isihluzi Screen enemingxuma Ngokuba uluthuli product
Air ongenisa mesh lokucoca ulwelo
Air ongenisa Net
Ingubo Air lokucoca
Air Isihluzi Kuba Industrial Air Filtraition
Air lokucoca Ilaphu okungangenwa ingubo lokucoca
Air product Bag
Media Icebo lokucoca eyanele Air
Air-ongenisa Isihluzi umnatha
Ngefoyile ye-aluminiyam Air Isihluzi umnatha
Best Thengisani Air-ongenisa lokucoca umnatha
Carbon Air product
Ehlala Best Thengisani Air-ongenisa Filter enemingxuma
Uthuli Ukususwa Air Siluthuli product
Icebo lokucoca ulwelo Kuba Industrial Air Filtraition
High Quality nylon Air-conditioner Filter enemingxuma / Air lokucoca umnatha
Intengiso Hot Air Imeko Iphe Isihluzi umnatha
Ipholiyesta Air lokucoca Bag
Useful Best Thengisani Air-ongenisa Filter enemingxuma